रुडुमा भत्कियो नेकपाको गड – Karnalipati
रुडुमा भत्कियो नेकपाको गड
कालीकोटः जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकामा–१० मा नेकपाको गड भत्तिएको छ । नेकपाको गड भनि चिनिएको तिलागुफा–१० रुडुमा नेपाली काँग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा पाटी परित्याग गरि काँग्रेमा प्रवेश गर्नेको संख्या बृद्धि भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीको नेतृत्वमा गएको टोलिले नेकपाको गड भत्काएको हो । तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ९ चिल्खाया र वडा नं. १० रुडुमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा १ सय ५० भन्दा बढी नेकपाका कार्यकर्ताहरु कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । तिलागुफा नगरपालिका वडा नं. ९ चिल्खायामा नेपाल तरुण दल तिलागुफा नगरकार्य समितिले आयोजना गरेको बिशाल आमसभा तथा वडा नं. १० को रुडुमा वडा पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपाकाले नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउदै नेकपाका गाउँ स्तरका नेता तथा कार्यकता कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
रोल्पाको लिवाङका रुपमा चिनिएको तिलागुफा नगरपालिकाको रुडु गाँउ तत्कालिन नेकपा माओबादीको गड मानिएको थियो । जहाँ झण्डै ५० जना नेकपाका कार्यकर्ताहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । २०७४ सालको स्थानिय तहको निर्बाचनमा तत्कालिन माओबादी केन्द्रले २ सय ५०, एमालेले ८४ र नेपाली कांग्रेसले १३ मत पाएको थियो । २०७४ सालकै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रुडुमा नेकपाले बुथ नै कब्जा गरी शतप्रतिशत मतदान गराएको थियो । रुडुका युवा नेता धिरेन्द्र थापाले कम्यूनिष्टको गडका रुपमा रहेको रुडुलाई नेकपाले तीन तहको सरकार हुदा पनि बिकासमा पछाडी पारेको भन्दै गाँउ नै कांग्रेसमा प्रवेश गरेको बताए ।
उनका अनुसार निर्बाचनका बेला रोल्पाको लिवाङ भन्दै नेकपाका नेताहरुले भाषण गरे । नगरपालिका प्रमूखमा तत्कालिन माओबादीका उम्मेदवार रतन शाहीले अत्याधिक भोट लिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा नेकपाका नेता दुर्गबहादुर रावत र कुर्मराज शाहीले शतप्रतिशत भोट लिए । तर उनीहरु चुनाव जितेपछि फेरी गाँउ फर्किएनन् । गाँउमा खानेपानीको सुविधा छैन् । २०३५ सालमा स्थापना भएको बिद्यालयमा भौतिक संरचना पनि छैनन् । यातायात, सिचाईको असुविधा छ । गाँउसंगै जोडिएको प्रचुर सम्भावना बोकेको चर्चित पर्यटकिय स्थल रुडुबन्चु पाटनलाई पनि कसैले वास्ता गरेनन् । कांग्रेसका पराजित उम्मेद्वार चुनाव हारेर पनि गाँउमा नागरिकको सुखदुखमा साथ दिईरहेका छन् भन्दै नेकपाका नेता तथा कार्यकता काँग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
रुडुमा पुगेका नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले रुडु गाँउमा नागरिकले भोगिरहेका समस्या र रुडुबन्चु पर्यटकिय क्षेत्रको विकासका लागि आफुले पहल गर्ने बताए । उनले जनतालाई झुटा सपनाहरु बाँड्ने नेकपाका नेताहरुलाई चुनौति दिदै आफुले कुरा भन्दा बढी काम गरेर देखाउने दाबी गरे । उनले भने, माओबादीको अखडा रोल्पाको लिवाङ भनेर दाबी गर्ने नेकपाका नेताहरुले रुडुगाँउका नागरिकहरुको जनमतको अपमान गरेको बताए । यसको परिणाम अवश्यक भोग्ने छन् । उनले आफु अहिले कांग्रेसको संगठन बिस्तारका साथै नागरिकहरुका समस्या बुझ्न गाँउ अभियानमा आएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कालिकोटका उपसभापती शंकरप्रसाद उपाध्याय, कांग्रेस नेताहरु प्रेमबहादुर शाही, अम्मबहादुर शाही, मनराज शाही, नन्दबहादुर शाही, लक्ष्मी शाही, खड्गजंग शाही, नविन हमाल, टिकाराम न्यौपाले लगायतका नेताहरुले कम्युनिष्टको झुटको खेतीकै कारण कालिकोटमा दिनप्रतिदिन कम्यूनिष्टका किल्लाहरु भत्कीदै गएको बताए । उनीहरुले अब आउने निर्बाचनमा कालिकोटमा वडा तहदेखी प्रतिनिधिसभासम्म कांग्रेसलाई पराजित गर्न कसैले पनि नसक्ने दाबी गरे ।